"Ayshirskaya" nke ụmụ ehi na-egosi: nkọwa na àgwà, atụmatụ nke na-eto eto na foto - Ugbo - 2019
Ayshirskaya ìgwè ehi na-akwado maka ozuzu na n'ebe ugwu.
Ụmụ anụmanụ ndị a adịghị anabata okpomọkụ ma nwee ike ime n'enweghi ihe oriri siri ike.
A na-ewere ha dị ka ndị tozuru okè site n'afọ nke abụọ nke ndụ.
Maka oge mbụ ụdị ehi a pụtara Scotland. Ya mere, aha ya si n'aka ndị obodo Scotland. Ụdị ahụ mere n'ihi ntụgharị nke Tisvater, Dutch, na mgbe ụfọdụ, Jersey na Shortgone na-azụlite ụdị mpempe akwụkwọ.
Nkwupụta nkwupụta nke nnyefe nke ụdị a na-eme na 1862. A na-ebute ehi ndị a na Russia mgbe mgbanwe nke 1917 gasịrị.
Nkesa ke Russia Federation bụ 3% nke ụdị ụdị ehi. Ọchịchị na-aga Finland - pasent 60 nke ndị bi na ya.
A na-enye ehi nke ụdị a ụdị ahụ kwesịrị ekwesị. Nwee iwu siri ike. Agba nke ehi brown-motley. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-ekwe omume izute ndị na-acha ọcha ma ọ bụ ndị ọcha zuru oke. Isi ha bụ elongated, akọrọ. Uwe ya na-ada ụda, na-eduzi ya.
Ugwo n'olu, obere, na ncha. Igbe dị obosara, miri. Sacrum dị ogologo, ọkpụkpụ dị nnọọ mkpa. A na-emepụta ọgwụ na-adịghị mma. Akpa dị ntakịrị, dịzie, nke dị oke.. A na-enye ehi dị iche iche nke ọkwá. A na-edozi nụ ụkwụ zuru ezu.
Agba na-enweghị abụbamkpa Ọnụ ọgụgụ ntutu isi adịghị adị. A na-eji girth nke ọnụ bụ 17-20 cm Na girth nke ahụ bụ 150-160 cm. Nke dị elu na ndị kpọnwụrụ akpọnwụ bụ 1.0-1.25 m.
Foto "Yashira" umu ehi:
A na-atụle ndị tozuru okè site na afọ 2. Nwa ehi mbu na-egosi na ọnwa nke mmadụ 24-28. Ibu ibu ụmụ amụrụ ọhụrụ adịghị agafe 30 n'arọ. Otu afọ mgbe e mesịrị, arọ ha nwere ike ịdị ruo 300 kg. Na ehi oke - 450-500 n'arọ. Azụ nwere ike iru 1 ton.
Ma àgwà anụ ha dị oke ala. Igbu mkpụrụ nke anụ anaghị ebute 50-55%. Ntuzi nke arụpụtaghị ụdị a bụ nanị mmiri ara ehi.. A maara ụdị ndị a maka àgwà dị iche iche mmiri ara ehi na abụba nke mmiri ara ehi. Afọ ojuju kariri 4%.
E nwekwara ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ mmiri ara ehi, dika: Jersey, Simmental, Red Steppe, Yaroslavl, Kholmogorskaya.
Ụdị mmiri ara ehi a dị mma maka ịme bọta. Site n'enye nri nri buru ibu, otu ehi nwere ike ịmepụta 4000-5000 lita nke mmiri ara ehi kwa afọ. Dekọọ mmiri ara ehi na-enye 11,000 lita. Ogologo oge nke lactation bụ ụbọchị 305. Njirimara protein na mmiri ara ehi dị iche site na 3 ruo 4%. Ihe dị n'ime mkpụrụ ndụ dị mkpirikpi dị ala.
Ọ dị mkpa! E nwere ike inye umuaka mmiri ara ehi. A na-eji ya na mmepụta nke nwa ọhụrụ.
Cows nke ụdị a nwere ike ibi na ọnọdụ ihu igwe ọ bụla, ma e wezụga na mpaghara nwere oke elu climates.
Ụdị a na-ahụkarị n'ebe ugwu nke Russian Federation, ebe ọ na-anabata ahụhụ dị mma.
Cows na-eji nwayọọ nwayọọ na-emegharị n'ebe ndị na-acha oyi na-atụ na okpomọkụ na oyi na-atụ.
Enwere ike ịbanye na nnukwu ebuka nke hay na nri akọrọ. N'ihi obere obere ya - rie obere. Echiche dị mkpa vitamin: A, D, E1, B12. Ha hụrụ English ryegrass, hedgehog, alfalfa, klova, foxtail, mkpo. Na mgbakwunye na Russian Federation, a na-enweta ìgwè ahụ na USA na Canada. A na-ebupụta ehi n'ubi na barn.
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ na-emetụta ahụ ike nke ehi. O nwere ike ime ka ọrịa na-ekpo ume na-arịa ọrịa siri ike, ọrịa na-emetụta ụbụrụ.
Ndị mmadụ n'otu n'otu na-amalite ibu ibu. Ọgwụgwọ ahụ ga-ewe ogologo oge. Iji gwọọ onye ọ bụla, ọ dị mkpa ịgbanwe ọnọdụ ihu igwe ya.
Iji chebe ịdị ọcha nke oke ehi, ọ bụ naanị ịchọrọ ebe dị mkpa. A na-ekwe ka ndị mmadụ na-ejikọta ihe na simmental na steppe.
Ma n'ihi na ọnụ ọgụgụ dị elu nke mkpụrụ na mmiri ara ehi bara ụba bara ụba, anaghị anabata ya.
Ụdị ahụ na-emeghachi omume na-ezighị ezi nye ehi nke ụdị ndị ọzọ.. Cows nwere ike ịghọ onye ike na egwu. N'oge ndị dị otú a, ha ga-anọpụ iche.
Enweela ikpe nke ndị mmadụ mejọrọ ụmụ ha, ehi na ehi nke ụdị nke ha. Nke a na-egosi àgwà ọjọọ nke ehi. Ha na-emekarị ka ha ghara ịkpọtụrụ mmadụ.
Ayshir anụ ọhịa Scotland na-eguzogide oyi. Mmiri ara ehi ndị a ezigbo abụba - karịa 4%. Eji ya mee ihe nke bọta na nwa ọhụrụ.
Site n'enye nri nri bara uru, otu onye nwere ike inye 4000-5000 lita nke mmiri ara ehi. Ịkụ mkpụrụ nke anụ anaghị ebute 50-55%, ya mere ọ bụghị uru.
Ihe kacha mma iche letus
Miltonia Orchid: kụrụ, nlekọta, ịzụlite, transplanting
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ A na-eji ehi na-eme nri maka ebe ugwu - "Ayshirskaya"